गच्छदार मुसो हो भने विरोलो को ? | सहारा टाइम्स
Home » Main-News » गच्छदार मुसो हो भने विरोलो को ?
गच्छदार मुसो हो भने विरोलो को ?
सत्ता समिकरणको खेलमा दुईटा दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी) केन्द्र लागेको छ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा अ‍ोलीको बहिर्गमन भएको छ तर यिनीहरुको चर्चा कतै छैन । चर्चा छ त केवल मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको । पार्टी विभाजन गरेर अध्यक्ष गच्छदार अलग भएदेखि यी दुईजनाबीचको द्धन्द समाप्त भएको छैन । एक अर्कालाई राजनीतिक रुपमा समाप्त पार्ने दावपेचमा लागि रहेका हुन्छन् । दुईजनाले मुसो विरोलोलका खेल खेलिरहेका हुन्छन् ।
यसपटक त सीमा नै नाघ्यो । काँग्रेस र एमाले सरकारको विरुद्ध भइरहेको ३० दलीय गठबन्धनको आन्दोलनलाई छाडेर काँग्रेस, एमाले र माओवादीसँग मिलेर १६ बुँदे सम्झौता गरेर सविधान निर्माण गर्ने कित्तामा उभिनु भएको थियो ।
मधेशमा आन्दोलन भइरहँदा, आन्दोलनमा मधेशी युवाहरु मारि रहँदा गच्छदार प्रचण्ड, केपी ओली र सुशिल कोइरालाको काँधमा काँध मिलाएर सविधान निर्माणमा लाग्नु भएको थियो । हुन त मधेशी जनतालाई देखाउनका लागि सविधानसभामा फरकमत पनि राख्नुभयो उहाँले तर अन्ततः पछि सविधानलाई स्वीकार नै गर्नुभयो र भन्नुभयो, सविधान पूर्ण छैन भने यसलाई पछि सुधार गर्न सकिन्छ ।
सविधान निर्माणपछि ओलीको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुन लागेपछि शुरु शुरुमा सहभागि हुनु भएन । र, सविधानमा पनि उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभएका थिएन तर अन्तिममा पार्टी र उहाँले गठन गरेको संघीय लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा (राजकिशोर र शरत सिह भण्डारीसमेत) लाई समेत जानकारी नदिई चार बुँदे सम्झौता गरेर सरकारमा सहभागि हुनुभएको थियो ।
उहाँले एउटा राज्यमन्त्री सहित दुईवटा मन्त्रालय लिएर ओली सरकारमा सहभागि भएपछि मधेशका विभिन्न माग राखि ८ बुँदे ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाउनु भएको थियो । ज्ञापनपत्र बुझाएपनि त्यसको कार्यान्वनका लागि कहिल्यै तागेदा गर्नुभएन ।
बरु सरकारमा रहेर मधेशी मोर्चा र संघीय गठबन्धनसँगको बार्तालाई कसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ भनि ओलीसँग बसेर तानाबाना बुन्ने काम गरेको आरोप उहाँमाथि छ । ओलीले मधेशलाई यति सारो गाली गरेपनि उहाँ सरकारमा रहेर पनि कहिले बोल्नु भएन । नौ महिनासम्म सरकारमा बस्नु भयो तर कहिल्यै मधेशको हितमा कुरा उठाउनु भएन । जब सरकार प्रमुख सत्तासाझेदार दल माओवादी केन्द्रले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएर प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए अनि गच्छदार अप्ठ्यारोमा पर्नुभयो ।
गच्छदारलाई ओली सरकार ढाल्ने इच्छा थिएन । अन्तिम समयसम्म ओली नेतृत्वको सरकार बचाउनमा लाग्नु भयो । असार २९ गते माओवादीका मन्त्रीले राजिनामा बुझाएको एकदिन अघि प्रधानमन्त्री र सत्तासाझेदार दलबीच छलफल हुँदा त्यो बैठकमा पनि गच्छदारले यो सरकार ढल्दैन भनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई आश्वास्त पार्ने प्रयास गर्नुभएको थियो । उहाँले यतिसम्म भनेका थिए कि अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउन बहुमत नै पुग्दैन, यो सरकार कायम रही रहन्छ । उहाँले बडो विश्वासका साथ भन्नुभएको थियो ।
उहाँकै भनाईमा ओली अन्तिम समयसम्म अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने भन्दै आउनु भएको थियो । हुन त रक्षा मन्त्री भिम रावलले पनि यो सरकार नढल्ने विश्लेषण गर्नुभएको थियो । त्यही कारणले गर्दा केही दिनसम्म अविश्वासको प्रस्तावलाई सामना गर्ने ओेलीले दृढता देखाउनु भएको थियो ।
तर, प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले आफ्नो पदबाट राजिनामा दिनुको ठिक एकदिन अघि ओली सरकारबाट आफ्नो समर्थन अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभ्याउनु भएको थियो । त्यही दिन अर्थात गच्छदारको विज्ञप्ति आउनुभन्दा पहिले संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष एवं संघीय गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवले संसदमा गच्छदारमाथि संकेत गर्दै मुसा प्रवृति भन्नुभएको थियो ।
मुसोले जहाजमा प्वाल परेको हुन्छ, जब जहाजमा पानी पस्न थाल्छ सबै डुब्ने खतरा हुन्छ भने सबभन्दा पहिलो मुसा भाग्ने गरेको कुरा सुनाउनु भएको थियो । त्यस्ता मुसा प्रवृति भएका दल तथा नेतालाई आफ्नो गठबन्धनको सरकारमा नलिन अध्यक्ष प्रचण्डलाई सुझाव पनि दिनुभएको थियो ।
संसदमा सांकेतिक रुपमा भनिएपनि उपेन्द्र यादवले अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर गच्छदारलाई सरकारमा लिनु भयो भने मधेशी मोर्चालाई यो सरकारको बारेमा सोच्न बाध्य हुने, सहयोग नहुन पनि सक्छ भन्दै गच्छदारलाई चेतावनी दिइ सक्नु भएको थियो । सरकारमा नआउन दिन उपेन्द्र यादवको मात्र होइन, मोर्चा तथा गठबन्धनका अन्य नेताहरु पनि वर्तमान सरकारमा गच्छदारलाई आउन नदिन नेताहरुलाई दवाव दिएका छन् । र, यो विषयलाई लिएर यी दुई पात्रको चर्चा राम्रै छ ।
अझै पुगेन !
यतिखेर अध्यक्ष गच्छदार कतिचोटी मन्त्री बनेको अहिले यतिखेर चर्चाका विषय बनेको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदार २०४८ सालदेखि हालसम्म १२ पटक मन्त्री बनि सक्नु भएको छ । २०४८ मा गिरीजा प्रस्ताद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा गच्छदार सुचना तथा सञ्चार राज्य मन्त्री बन्नु भएको थियो । त्यसपछि लगातार क्याविनेट मन्त्री नै बन्नुभएको छ ।
मन्त्रालयहरु मध्ये मालदार मन्त्रालयको रुपमा चिनिएका भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय मात्र ६ पटक उहाँले सम्हाल्नु भएको छ । यतिसम्म कि ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेका प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, सुशील कोइराला र ओली गरी ६ वटा सरकारमध्ये खनाल र कोइराला नेतृत्वको सरकारमा मात्र गच्छदार सहभागी हुन पाउनु भएन ।
बाँकी सबै सरकारमा मालदार मन्त्रालय सम्हाल्नुभयो । तीनपटक उपप्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएका गच्छदारले एकपटक प्रधानमन्त्रीको पनि उम्मेदवार बन्नुभएको थियो ।
उपप्रधानमन्त्री भएको नाताले प्रधानमन्त्री नहुँदा कार्यवाहक मन्त्री पनि चलाउनु भएको छ । २०६५ सालमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका तर्फबाट उपेन्द्र यादवसँगै भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री बन्नुभएको थियो । तर त्यो सरकार नौ महिना मात्र चल्यो ।
२१ वैशाख ०६६ मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनपछि ११ जेठ ०६६ मा एमाले नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भयो । माधव कुमार नेपालको नेतृत्वको सरकारमा जाने नजाने विषयमा दुई नेताबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
गच्छदारले जसरी पनि सरकारमा जाने भन्नुहुन्थ्यो भने उपेन्द्र यादव सरकारमा नजाने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । अन्ततः पार्टी फुटाएर पनि गच्छदार माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा जानु भयो । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा गच्छदारमात्र होइन मधेशी मोर्चा समेत गएन, त्यसमा उपेन्द्र यादव मात्र जानुभयो ।
तर त्यो सरकार धेरै दिन टिकेन । १२ भदौ ०६८ मा डा.बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भयो । त्यसमा पनि मधेशी मोर्चा पुरै तामझामका साथ गएका थिए । तर उपेन्द्र यादव त्यो सरकारमा सहभागि हुनुभएन । त्यो सरकारमा मधेशी मोर्चालाई लैजाने कामको अगुवाई जेपी गुप्ताले गर्नुभएको थियो । यस सरकारमा पनि गच्छदार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुनुभएको थियो ।
डा.बाबुराम भट्टराईले सविधानसभा विघटन गरेपछि प्रधानन्यायधिश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएको थियो । त्यो सरकारले सविधानसभाको चुनाव गराएपछि नेपाली काँग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री बनेका थिए त्यो सरकारमा सहभागि हुन पाउनु भएन । हुनत त्यो सरकारमा पनि सहभागि हुनका लागि कम्ति प्रयास नगरेको होइन तर सुशिल कोइरालाले गच्छदारलाई भाव दिनु भएका थिएन । एमाले र काँग्रेस मिलेर नै बहुमतको सरकार बन्छ भने गच्छदारलाई किन लिने भन्दै गच्छदारले सरकारमा जाने इच्छा देखाएपनि कोइरालाले लिनु भएका थिएन ।
त्यसपछि मात्र उहाँले अध्यक्ष प्रचण्डसँग मिलेर गठबन्धन बनाउनु भयो । त्यति मात्र होइन पछि मधेशी मोर्चालाई एक्टीभ गर्न पनि अगुवाई गर्नुभयो ।
यी दुई संगठनबाट शक्ति आर्जन गरिसकेपछि उहाँले नेपाली काँग्रेस, एमाले र माआवादीसँग मिलेर २०७२ जेठ २५ गते १६ सम्झौता गर्नुभएको थियो । १६ बुँदे सम्झौता गरेपछि उहाँ लगातार सविधान निर्माण र सरकार पूर्णगठनको वकालतमा लाग्नुभयो । पछि उहाँले ओली सरकारमा सहभागि हुनका लागि ४ बुँदे सम्झौता गर्नभयो र सरकारमा सहभागि हुनुभयो ।
अहिले पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारमा जानका लागि पनि गच्छदारले मरिहत्ते गर्नुभएको छ । मधेशी मोर्चा तथा संघीय गठबन्धनका कतिपय नेताहरुले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई भनिसकेका छन् कि अध्यक्ष गच्छदारलाई सरकारमा लिनुभयो भने आफूहरुको सहकार्य नहुनसक्छ । त्यही कारणले अध्यक्ष प्रचण्डसँग सरकारको बारेमा फाइनल गरिरहेका छैन ।
गच्छदारको सरकारी यात्रा
–२०४८ प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइराला
गच्छदार, सुचना तथा सञ्चार राज्य मन्त्री
–२०५२, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा
गच्छदार, निर्माण तथा यातायात मन्त्री
–२०५४, प्रधानमन्त्री सुर्यबहादुर थापा
–२०५५, प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइराला
–२०५६, प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई
गच्छदार, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री
–२०५६, (पुनःगठन) प्रधनमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई
गच्छदार, जलस्रोत मन्त्री
–२०५८, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा
–२०६५, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
गच्छदार, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री
–२०६६, प्रधानमन्त्री मधावकुमार नेपाल
गच्छदार, उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री
–२०६८, प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई
गच्छदार, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री
–२०६९, (पुनःगठन) प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई
गच्छदार, उपप्रधान एवं गृह तथा रक्षा मन्त्री
–२०७२ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
गच्छदार, उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री